Waxaan ku bixinnaa adeegyada shaqaalaha xafladaada qeybaha soo socda:
Kaaliyaha Macluumaadka Buug
Dhiirrigelinta Dhacdooyinka Shirkadda
Martida loo yaqaan 'Booth hostesses'
Moodooyinka Ciyaaraha Ciyaaraha
Banaanbaxayaasha Wax soo Saarka
Dhiirrigeliyaasha Dhacdooyinka Wadooyinka
Kooxaha Buug-siinta Dhacdooyinka
Banaanbaxayaasha Summada leh
Shaqaalaha Diiwaangelinta Dhacdooyinka
Dhiirrigelinta Dhacdooyinka Ololaha
Cuntada martida loo yahay
Master of xafladaha
Shuruudahaaga saxda ah, fadlan nala soo xiriir Haddii xafladaha ama munaasabadaha, shaqaaluhu matalaan shirkaddaada.
Xaashida bandhig faneed ee xirfadaysan ayaa soo bandhigeysa shirkadaada kaliya kuma aha Belgrade, laakiin sidoo kale waa kaarkaaga booqashada ee martida caalamiga ah. Waxaan ka soo qaadnaa abaabulka muuqaalkaaga qurxoon gacmihi kama yimaado gacmahaaga laakiin waxaan kugu taageernaa si firfircoon iyo tafaasiisha ugu yar marka la fuliyo fikradahaaga.
Marti noo-marti ah iyo marti-geliyadeena ayaa loo tababbaray inay sax yihiin oo leeyihiin xirfado takhasus leh oo PC ah iyo luqado qalaad.
Kooxdayadu waxay hubisaa in muuqaalkaaga qurxoon iyo dhacdooyinkaagu ay guuleystaan ​​oo aad u wanaagsan.
Si kastaba ha noqotee, ma illaawin waxa naga dhigay guul: Qancinta macaamiisha oo ah ahmiyada ugu sareysa, daryeel shaqsiyeed iyo hubinta tayada oo ah mowduuca koowaad.
Waxaad haysataa badeecad wanaagsan oo aad rabto inaad kordhiso aragtida marka la iibinayo?
Hay'ada SNOB waxay kaa caawineysaa qaabeynta, abaabulka iyo hirgelinta dallacsiinta iibka.
Sababtoo ah maalmahan dambe oo aan laftiisa la iibin karin, waxaan rumeysan nahay Dhiirrigelinta, oo higsaneysa. Shaqaalaheenna dallacsiinta ayaa sababtan u diyaariyey tababarka wax soo saarka shirkadda, tababarka iibka iyo dhiirrigelinta ugu wanaagsan ee howlaha.
Olole dhiirrigelin oo guul leh ayaa kordhiya qiimaha aqoonsiga shirkaddaada iyo alaabadaada. Waxaad ku kasban kartaa macaamiisha nooc cinwaan gaar ah, cinwaanno cusub, ka dibna ku guuleysta u qalmidda maaraynta.
Bilaabida guusha leh ee badeecadaada waxaa si wanaagsan u taageeraya dhiirrigelin hal abuur leh waxayna kuu xaqiijineysaa inaad sare u kac ka qaadid wacyigaaga.
In kabadan 7 sano ee warshadaha, waxaan baranay in sirta guusha guusha dhacdo ay tahay koox martida loo yahay iyo martigaliyeyaal xirfadlayaal ah, loo wada shaqeeyey, halkaasna looga caawiyo macmiilka isagoo joogi kara adeegga martidooda. si walba. Waxaan si sharaf leh u dhihi karnaa waxaan aragnay baahi macquul ah oo marti gelin / marti gelin suuqan soo koraya.
Adeegyadeena ugu caansan:
Dhacdooyin rasmi ah iyo xaflado
Waxaan khabiir ku nahay maaraynta munaasabadaha rasmiga ah: dowladda iyo macaamiisha shirkada, waxaan leenahay marti sharaf iyo marti sharaf ku takhasusay xafladaha rasmiga ah. Ka sokow soo bandhigid qurux badan iyo dabeecad ku habboon munaasabadda, waxaan xoogga saareynaa baahiyaha gaarka ah ee dhacdada oo su'aal ka taagan tahay iyo xeerarkeeda amniga.
Shirarka jaraa'id iyo dhacdooyinka saxaafadeed, asxaabteena ayaa soo dhaweyn doona ka qeybgalayaasha imaatinka ah, si dhaqso leh oo xushmad leh wax uga qabashada diiwaangelinta wakiilada saxaafadda, waxayna ka caawin doonaan isticmaalka makarafoonka inta lagu gudajiro dhacdada.
Hadday tahay maalin-maalin ama shir-maalmeed badan, asxaabteena ayaa joogi doona inta lagu jiro, laga soo bilaabo diyaargarow ilaa dhammaadka dhacdada, waxayna diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan ​​wixii dhibaato ah ee ka soo bixi kara.
Soo Bandhigga Gudaha iyo Dibaddaba iyo Bandhigyada
Waxaan si kalsooni leh u dhihi karnaa kooxdeena ayaa heysata wixii ay leedahay munaasabad kasta ha noqotee, ha ahaato Hungary ama dibada. Waxaan diiwaangelinnaa oo soo dhaweynaa martida, waxaan ka caawineynaa qolalka buugaagta hoteelada, waxaan bixinaa macluumaad ku saabsan jadwalka munaasabadda, waxaan u qeybineynaa qalabka tarjumaadda - eray ahaan, waxaan sameyneynaa wax walba oo aan ku qancin karno martida iyo abaabulayaasha labadaba.
XAALADAHA CAAFIMAADKA DUGSIGA
HORECA EQUIPMENT FAIR
XEER ILAALINTA CAAFIMAADKA
MACLUUMAAD DHEERAAD AH OO KU SAABSAN TAARIIKHAHA DHAMMAAN - CACIB BELGRADE
NAUTICKA NAUTIC, HINTING & FISHING Show
MOTOR SHOW (OICA)
MADAXWEYNAHA CIIDAMADA SHAQADA
HARKA GALMUDUG CALANKA - XUQUUQDA AADAN
MADAXWEYNAHA CAAFIMAADKA IYO FAA'IIDADA XAALADA, HAIRCARE, AESTHETICS iyo CAAFIMAADKA
FAAHFAAHINTA DHAQAALAHA CARUURTA
XUQUUQDA caalamiga ah ee farsamada iyo xirfadaha farsamada (UFI)
KHATARTA GUUD EE QALBIGA
BADBAADADA EXPO BALKAN
Cilmiga dhulka, CODKA iyo CARRUURTA FARSAMADA FAIR - GRAFIMA
CUDURKA ITOOBIYA IYO XAFIISKA XAQIIQADA FAAFADA - BIROEXPO
QARAXII FARSAMADA FARSAMADA DIIWAANKA IYO XIRIIRADA
FAAHFAAHINTA INTERNATIONAL ENERGY FAIR
ILAALINTA CAAFIMAADKA DALKA IYO KHATARAHA DHAQANKA FAIR - ECOFAIR
XAALADAHA CAAFIMAADKA Caalamiga ah
BAARLAMAANKA BELGRADE BOOK FAIR
FAAHFAAHINTA WAXBARASHADA WAXBARASHADA DHEXE IYO QALBINIMADA
BELL FAIR - WAXBARASHADA FAARAX
XAQIIJINTA Xogta, Isgaarsiinta iyo Suuqgeynta
XAALADAHA CAAFIMAADKA EE DHAQAALAHA, QALBINTA IYO XUQUUQDA INTERNORKA (UFI)
KHUDBADAHA MACLUUMAADKA, XAQIIQOOYINKA iyo WAXBARASHADA CUDURKA ganacsiga (UFI)
XAQIIQADA CUNTADA CUNTADA IYO dawooyinka